Blood pressure မဟုတ်တဲ့ Pulse pressure အကြောင် - THIT HTOO LWIN (Daily News) '; summ = summary_img; } var summary = imgtag + '
Blood pressure မဟုတ်တဲ့ Pulse pressure အကြောင်
သွေးပေါင်တော့အားလုံးချိန်ဖူးကြမှာပါ ။ သွေးတိုးရှိမရှိ သိချင်ရင် သွေးပေါင်ချိန်လိုက်လို့ရလာတဲ့ အပေါ်သွေး (systolic pressure) ဘယ်လောက် အောက်သွေး (diastolic Pressure) ဘယ်လောက်ဆိုတာနဲ့ ဆုံးဖြတ်ကြတာမလား။ ဒီ systolic pressure ရော diastolic Pressure ရောက blood pressure (သွေးပေါင်ချိန်)တွေပါ။ သွေးတိုးရှိမရှိ သူတို့က ဆုံးဖြတ်ပေးတာပေါ့။
ဒီနေ့ပြောမယ့် အကြောင်းလေးကျတော့ လူတိုင်း သိပြီးသားနီးပါဖြစ်နေတဲ့ blood pressure အကြောင်းမဟုတ်ပါဘူး။ အပေါ်မှာပြောခဲ့တဲ့ systolic pressure ထဲက diastolic Pressure ကို နှုတ်လိုက်ရင် ရလာတဲ့ pulse pressure အကြောင်းပါ။ pulse pressure လေးက သွေးတိုးရှိမရှိကို ဖော်ပြပေးတာမဟုတ်ဘဲ ကိုယ့်နှလုံးအခြေအနေကို ဖော်ပြပေးတဲ့ အရာလေးပါ။ ဒီတော့ သူကလည်း အရေးကြီးတာပဲပေါ့။
သွေးပေါင်ချိန်ကို ပုံမှန်က ၁၂၀/၈၀ လို့သတ်မှတ်ထားတော့ Pulse pressure ပုံမှန်ကရော ဘယ်လောက်ရှိသလဲ ။
အပေါ်သွေးထဲကနေ အောက်သွေးပမာဏကို နှုတ်လိုက်ရင် Pulse pressure ရတယ်ဆိုတော့ ၁၂၀ထဲက ၈၀ ကိုနှုတ် Pulse pressure ၄၀ လောက်ရတယ်။ ဒါက ပုံမှန်ရှိသင့်တဲ့ Pulse pressure ပမာဏပါ။ ၄၀ အတိအကျမဟုတ်ဘဲ ၄၀ – ၆၀ ကြားထဲဆိုလည်း ပုံမှန်ပါပဲ။
သူတို့က အမြဲတမ်း ဒီ ၄၀-၆၀ ကြားထဲမှာပဲရှိနေတာလား။
မဟုတ်ပါဘူး။ pulse pressure များနေတာ၊ နည်းနေတာတွေလည်း ရှိတတ်ပါတယ်။
Wide pulse pressure. (pulse pressure များနေခြင်း)
အသက်ကြီးလာရင် သွေးကြောတွေ တောင့်သွားတတ်တာကြောင့် Pulse pressure လည်းလိုက်တက်လာလေ့ရှိပါတယ်။ တစ်ချို့ အပေါ်သွေးပေါင်ချိန်များပြီး အောက်သွေးပေါင်ချိန်နည်းနေတဲ့ (ဥပမာ- 150-85) တို့ အပေါ်သွေးပုံမှန် အောက်သွေးကျနေတဲ့ (120/60) လူတွေမှာဆို အပေါ်သွေး အောက်သွေး ခြားနားချက်က ၆၀နှင့် အထက်မှာ ရှိနေတတ်ပါတယ်။ ဒီလို pulse pressure ၆၀ ထက်များနေတာကို wide pulse pressure လို့ခေါ်ပါတယ်။ wide pulse pressure တွေ့နိုင်တဲ့ရောဂါတွေကတော့
• သွေးတိုး ရောဂါ
• သံဓာတ်ချို့တဲ့ သွေးအားနည်းရောဂါနဲ့
• သိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်းများနေတဲ့ ပြဿနာတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီ wide pulse pressure ရှိသူတွေက နောက်ပိုင်းကျရင် နှလုံးရောဂါနဲ့ လေဖြတ်တဲ့ ဝေဒနာခံစားရနိုင်ဖို့ အလားအလာများပါတယ်။
Narrow pulse pressure (pulse pressure နည်းနေခြင်း)
Pulse pressure ပုံမှန် ပမာဏက ၄၀ – ၆၀ ကြားဆိုတော့ ၄၀ အောက်နည်းသွားရင် Narrow pulse pressure လို့ခေါ်ပါတယ်။ ဒီလို Narrow pulse pressure ဖြစ်နေပြီဆိုရင် နှလုံးက ကောင်းကောင်းမညှစ်နိုင်တော့ဘူးဆိုတာကို ဖော်ပြပါတယ်။ heart failure (နှလုံးစွမ်းဆောင်ရည်ကျဆင်းတဲ့ရောဂါ ) ပိုင်ရှင်တွေမှာ ဆို ၄၀ လောက်ပုံမှန်ရှိရမယ့် pulse pressure က ၂၀ လောက်ပဲ ရှိနေတတ်ပါတယ်။ နှလုံးရောဂါဖြစ်နေတဲ့သူတွေမှာ low pulse pressure ဖြစ်နေပြီဆိုတာနဲ့ သေချာ သတိထားစောင့်ကြည့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
ဒ့ါကြောင့် သွေးပေါင်ချိန်လိုက်လို့ ၁၂၀/၆၀ ဖြစ်နေတယ် သွေးမတိုးပါဘူးဆိုပြီး အေးဆေးလုပ်နေလို့မရပါဘူး။ နှုတ်လိုက်ရင် ၆၀ လောက်ဖြစ်နေတာကြောင့် wide pulse pressure ဖြစ်နေတာကို သတိထားရပါတယ်။ သွေးတိုးသမားတွေဆိုပိုလို့တောင်သတိထားရပါဦးမယ်။ ချိန်လိုက်လို့ ၁၈၀/၁၂၀ ဖြစ်နေတယ်ဆို တကယ်ကို အန္တရာယ်များတဲ့ အနေအထားပါ။ နောက်ပြီး ၁၀၀/၈၀ သမားတွေလည်း သတိထားရပါဦးမယ်။ သွေးပေါင်ချိန် blood pressure ကတော့ ပုံမှန်ဖြစ်နေသယောင်ယောင်ရှိနေပေမယ့် နှုတ်လိုက်ရင် ၂၀ ဖြစ်နေတာကြောင့် low pulse pressure ဖြစ်နေပါပြီ။ ဒါ့ကြောင့် ကိုယ်သွေးပေါင်ချိန်တိုင်း blood pressure အပြင် အပေါ်သွေးထဲက အောက်သွေးကို နှုတ်ပြီး pulse pressure ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာတွက်ကြည့်ဖို့လည်း မမေ့ပါနဲ့။ ။
“ယခုဆောင်းပါးကို Myanmar Digital News ၏ မိတ်ဘက်ဖြစ်သည့် ကျန်းမာရေးနှင့် ဆေးပညာဝက်ဘ်ဆိုဒ် Hello ဆရာဝန် https://hellosayarwon.com/ မှ ကူးယူဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်”
Blood pressure မဟုတျတဲ့ Pulse pressure အကွောငျး ။ ။
သှေးပေါငျတော့အားလုံးခြိနျဖူးကွမှာပါ ။ သှေးတိုးရှိမရှိ သိခငျြရငျ သှေးပေါငျခြိနျလိုကျလို့ရလာတဲ့ အပျေါသှေး (systolic pressure) ဘယျလောကျ အောကျသှေး (diastolic Pressure) ဘယျလောကျဆိုတာနဲ့ ဆုံးဖွတျကွတာမလား။ ဒီ systolic pressure ရော diastolic Pressure ရောက blood pressure (သှေးပေါငျခြိနျ)တှပေါ။ သှေးတိုးရှိမရှိ သူတို့က ဆုံးဖွတျပေးတာပေါ့။
ဒီနပွေ့ောမယျ့ အကွောငျးလေးကတြော့ လူတိုငျး သိပွီးသားနီးပါဖွဈနတေဲ့ blood pressure အကွောငျးမဟုတျပါဘူး။ အပျေါမှာပွောခဲ့တဲ့ systolic pressure ထဲက diastolic Pressure ကို နှုတျလိုကျရငျ ရလာတဲ့ pulse pressure အကွောငျးပါ။ pulse pressure လေးက သှေးတိုးရှိမရှိကို ဖျောပွပေးတာမဟုတျဘဲ ကိုယျ့နှလုံးအခွအေနကေို ဖျောပွပေးတဲ့ အရာလေးပါ။ ဒီတော့ သူကလညျး အရေးကွီးတာပဲပေါ့။
သှေးပေါငျခြိနျကို ပုံမှနျက ၁၂၀/၈၀ လို့သတျမှတျထားတော့ Pulse pressure ပုံမှနျကရော ဘယျလောကျရှိသလဲ ။
အပျေါသှေးထဲကနေ အောကျသှေးပမာဏကို နှုတျလိုကျရငျ Pulse pressure ရတယျဆိုတော့ ၁၂၀ထဲက ၈၀ ကိုနှုတျ Pulse pressure ၄၀ လောကျရတယျ။ ဒါက ပုံမှနျရှိသငျ့တဲ့ Pulse pressure ပမာဏပါ။ ၄၀ အတိအကမြဟုတျဘဲ ၄၀ – ၆၀ ကွားထဲဆိုလညျး ပုံမှနျပါပဲ။
သူတို့က အမွဲတမျး ဒီ ၄၀-၆၀ ကွားထဲမှာပဲရှိနတောလား။
မဟုတျပါဘူး။ pulse pressure မြားနတော၊ နညျးနတောတှလေညျး ရှိတတျပါတယျ။
Wide pulse pressure. (pulse pressure မြားနခွေငျး)
အသကျကွီးလာရငျ သှေးကွောတှေ တောငျ့သှားတတျတာကွောငျ့ Pulse pressure လညျးလိုကျတကျလာလရှေိ့ပါတယျ။ တဈခြို့ အပျေါသှေးပေါငျခြိနျမြားပွီး အောကျသှေးပေါငျခြိနျနညျးနတေဲ့ (ဥပမာ- 150-85) တို့ အပျေါသှေးပုံမှနျ အောကျသှေးကနြတေဲ့ (120/60) လူတှမှောဆို အပျေါသှေး အောကျသှေး ခွားနားခကျြက ၆၀နှငျ့ အထကျမှာ ရှိနတေတျပါတယျ။ ဒီလို pulse pressure ၆၀ ထကျမြားနတောကို wide pulse pressure လို့ချေါပါတယျ။ wide pulse pressure တှနေို့ငျတဲ့ရောဂါတှကေတော့
• သှေးတိုး ရောဂါ
• သံဓာတျခြို့တဲ့ သှေးအားနညျးရောဂါနဲ့
• သိုငျးရှိုကျဟျောမုနျးမြားနတေဲ့ ပွဿနာတှပေဲ ဖွဈပါတယျ။
ဒီ wide pulse pressure ရှိသူတှကေ နောကျပိုငျးကရြငျ နှလုံးရောဂါနဲ့ လဖွေတျတဲ့ ဝဒေနာခံစားရနိုငျဖို့ အလားအလာမြားပါတယျ။
Narrow pulse pressure (pulse pressure နညျးနခွေငျး)
Pulse pressure ပုံမှနျ ပမာဏက ၄၀ – ၆၀ ကွားဆိုတော့ ၄၀ အောကျနညျးသှားရငျ Narrow pulse pressure လို့ချေါပါတယျ။ ဒီလို Narrow pulse pressure ဖွဈနပွေီဆိုရငျ နှလုံးက ကောငျးကောငျးမညှဈနိုငျတော့ဘူးဆိုတာကို ဖျောပွပါတယျ။ heart failure (နှလုံးစှမျးဆောငျရညျကဆြငျးတဲ့ရောဂါ ) ပိုငျရှငျတှမှော ဆို ၄၀ လောကျပုံမှနျရှိရမယျ့ pulse pressure က ၂၀ လောကျပဲ ရှိနတေတျပါတယျ။ နှလုံးရောဂါဖွဈနတေဲ့သူတှမှော low pulse pressure ဖွဈနပွေီဆိုတာနဲ့ သခြော သတိထားစောငျ့ကွညျ့ဖို့လိုအပျပါတယျ။
ဒ့ါကွောငျ့ သှေးပေါငျခြိနျလိုကျလို့ ၁၂၀/၆၀ ဖွဈနတေယျ သှေးမတိုးပါဘူးဆိုပွီး အေးဆေးလုပျနလေို့မရပါဘူး။ နှုတျလိုကျရငျ ၆၀ လောကျဖွဈနတောကွောငျ့ wide pulse pressure ဖွဈနတောကို သတိထားရပါတယျ။ သှေးတိုးသမားတှဆေိုပိုလို့တောငျသတိထားရပါဦးမယျ။ ခြိနျလိုကျလို့ ၁၈၀/၁၂၀ ဖွဈနတေယျဆို တကယျကို အန်တရာယျမြားတဲ့ အနအေထားပါ။ နောကျပွီး ၁၀၀/၈၀ သမားတှလေညျး သတိထားရပါဦးမယျ။ သှေးပေါငျခြိနျ blood pressure ကတော့ ပုံမှနျဖွဈနသေယောငျယောငျရှိနပေမေယျ့ နှုတျလိုကျရငျ ၂၀ ဖွဈနတောကွောငျ့ low pulse pressure ဖွဈနပေါပွီ။ ဒါ့ကွောငျ့ ကိုယျသှေးပေါငျခြိနျတိုငျး blood pressure အပွငျ အပျေါသှေးထဲက အောကျသှေးကို နှုတျပွီး pulse pressure ဘယျလောကျရှိလဲဆိုတာတှကျကွညျ့ဖို့လညျး မမပေ့ါနဲ့။ ။